Shiinaha Awoodda safarka caanka ah ee awoodda sare leh 65W nooca c pd USB xeedho PD65W Soo-saar iyo Warshad | Staba Electric
Safarka caanka ah ee awooda sare ee 65W nooca c pd USB xeedho PD65W
*Quick Charge Pd 65W Faahfaahinta Faahfaahinta
Teknoolojiyada GaN ee ugu dambeysa: oo ay ku shaqeyneyso tiknoolajiyada GaN, xeedho gan ayaa noqota mid sii yaraata & xajmisa wax ku oolnimada kuleylka iyadoo dhalisa kuleyl yar. 65W pd gan xeedho ayaa awood u leh in si buuxda looga qaado 15.4 ”MacBook Pro-gaaga 2 saacadood oo keliya.
Waxaa ku shaqeeya GaN tech, xeedho-bixiyahan ayaa 30% ka yar kuwa kale ee xeedho-sameeyeyaasha ah, oo aad u isafgaradsan inuu kula socdo meel kasta oo aad tagto. Xeedho 65W PD isafgarad leh oo leh bixinta USB-power waxay ka dhigan tahay lacag-bixin deg deg ah oo loogu talagalay qalabkaaga USB-PD-karti u leh. Qalabkan safarka ah ee saaxiibtinimada ku shaqeeya ee labada xeedho ee darbiga ah waxaa loogu talagalay inuu 5 jeer ka dhiibo awoodda xeedhooyinka caadiga ah qalab fara badan oo isku mar ah. Soo bandhigida isbeddelada ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada xawaaraha sare leh, bixinta USB-C iyo la-qabsiga degdegga ah, hal xeedho oo keliya ayaa ah waxa aad u baahan tahay oo dhan si aad u awood u yeelatid aaladahaaga hadda jira ugana sii horreeyso qalooca wixii elektaroonig ah ee soo socda.
Labada dekedoodba waxay geyn karaan lacag-koronto sarreysa wax kasta oo ka yimaada taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada illaa laptop-yada awood-u-gaajaysan ee USB-C sida 12-inch Macbook. Waxay taageertaa lacag deg deg ah iPhone si ay ugu soo oogaan iPhone 8 ama goor dambe eber ilaa 50% 30 daqiiqo oo ay kujiraan fiilada la socota, iyo taleefannada casriga ah / kiniiniyada xawaaraha ugu fiican. Sidoo kale qalabka loo yaqaan 'smart IC chip' - Chip-ka horumarsan ee 'IC chip' wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa uguna keenaa awoodda ugu fiican ee ku amraya qalabka ku xiran.
Qalabkaagu sida ugu dhakhsaha badan ayuu kaaga dallacayaa isagoo ilaalinaya nolosha batterigaaga. (Ku habboon labada PD & QC xukun). Premium iyo Portable - Dekedaha waxaa lagu tijaabiyay in ay iska caabiyaan in ka badan 10,000 oo adeegsi iyadoo xeedhona loo farsameeyay in ay iska caabbiso amarka joogtada ah ugu yaraan 10,000 saacadood, taas oo ku siinaysa tayo aad ku kalsoonaan karto. Pd gan usb xeedho leh qaybinta Awoodda Caqliga leh, oo badinaysa waxtarka shaqada ee aaladaha hal ama dhowr ah. Waxaa loogu talagalay inay la shaqeyso jiilkii ugu dambeeyay ee kombiyuutarada iyo aaladaha casriga ah, taasoo u oggolaanaysa jahaynta jihada laga rogi karo iyo xukun deg deg ah.
*Nooca C Pd xeedho xeedho taleefan 65W Halbeegga
GaN Technology Nooca C Pd Charger
Amni Sare Pd Xeedho Telefoon
Jaanqaadi Nugul Pd GaN USB xeedho
Qoondaynta Awoodda Sirdoonka Pd Wall Charger
Si xariifnimo ah ayey u qaybisaa 65W oo awood ah inta udhaxeysa 3 aaladood markay isku mar wada shubaneyso waxayna taageertaa xawaare sare oo kuleyl ah ilaa 65W marka hal aalad ay kuxirantahay, waa xeedho darbi caqli badan
Hore: Jiilkii ugu dambeeyay ee la qaadan karo dekedda 'muti portable smart' xeedho xeedho PD100W
Xiga: Wareeg culus oo miisaanka culus leh adabtarada gidaarka USB 65W